थाहा खबर: यी हुन् ट्रम्पकी श्रीमती मेलियाना, जसको नग्‍न फोटो अहिले चर्चामा छ
कात्तिक २५, २०७३
१५ वर्षअघि डोनाल्ड ट्रम्पकी तत्कालीन प्रेमिका मेलियायाना कानुसले बेलायतको जिक्यू म्यागेजिनका लागि नग्न फोटो सुट गरेकी थिइन्। ट्रम्पको जेट प्लेनमा यी फोटोहरु खिचिएको थियो। यस तस्विरमा उनले चेन र हिरा लगाएकी छिन्। पेस्तोल बोकेकी छिन्। अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा ट्रम्पको विजयसँगै मेलिना अमेरिकाको फस्ट लेडी बनेकी छिन्। अहिले चर्चा उनको छ। उनका नग्न फोटोको छ।
जिक्यूका सम्पादक डायलनलाई यसै वर्षको सुरुआतमा द हलिउड रिपोर्टरले यस घटनाका विषयमा प्रश्‍न राखेको थियो। जवाफमा जोन्सले भनेका थिए,'त्यतिबेला जिक्यूमा फोटो खिचाउन उनी निकै आतूर थिइन्। डोनाल्ड ट्रम्प पनि यी फोटो हेर्न निकै आतूर थिए। उनले आफ्नो कार्यालयमा फोटो पठाइदिन आग्रह गरे। हामीले यस फोटोलाई कभरमा प्रकाशित गर्‍यौं। केही फोटोका प्रिन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यालयमा पठाइदियौं।'
यस्तो थियो जनवरी २००० को बेलायती संस्करणमा जिक्यूले नग्न तस्विर समावेश गरेर लेखेको समाचार :
के स्टाइलिस जेट-सिट चाहिन्छ ? चाहिने भए सेक्स,स्टायल र १८ क्यारेटको सुनका सिल्ट बेल्ट महत्वपूर्ण छन्। सुपर मोडल मेलियाना १४ पृष्ठको हाई लिभिङका लागि लन्च प्याड हुन्।
३० हजार फिटमाथि यात्रा गरिरहदाँ तपाईले कहिल्यै अर्को व्यक्तिसँग समिप्यमा आउने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईको यो कल्पना अब भर्जिन एटलान्टिकमा पुरा हुनसक्छ। यहाँ अपर क्लास प्यासेन्जरलाई डबल बेडको व्ववस्था छ। यदी तपाई यस्तो यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले जेट-सिटमा यात्रा गर्नुपर्छ। यसका केही नियम छन्।
डोनाल्ड ट्रम्पले कसरी यस्तो गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई देखाउँनेछन्। न्यूयोर्कका धनाढ्य ट्रम्प यस जेट प्लेनका मालिक हुन्। रिफर्म पार्टीको राष्ट्रपति उमेद्वार रहेका ट्रम्प आफ्नो शान्दार ७२७ बोइङलाई लिएर गर्व गर्छन्। उनी इन-फ्लाईट आर्टका विशेषज्ञ हुन्।
यस प्लेनका सिट बकल्सहरु १८ क्यारेटको सुनबाट बनेका छन्। ट्रम्पकी पर्सनल होस्टेस २६ वर्षकी स्लोभेनियाली सुपर मोडल मेलियाना कानुस यस विमानकी आर्कषण हुन्।
'उनी चर्चित छिन्। बुद्धिमान छिन्। मज्जाकी महिला हुन्।' ट्रम्पले भनेका छन्।
स्रोत : जिक्यू म्यागेजिन डटकम